Sidee baan u iibsan karaa HGH ee Thailand?
- Way fududahay hadda, waxaad ku dari kartaa amarkaaga boggayaga internetka si sax ah u tilmaamaya cinwaanka bixinta, magacaaga iyo habka lacag bixinta, waxaan kuugu soo wici doonnaa dib u soo dir ama E-mail wakhtiga dhalmada oo faahfaahsan
Sidee u kaydisaa HGH?
- Waxaan ku kaydinaa alaabooyinka qaboojiyaha heerkulka 2-8. Waa xaaladaha ugu fiican ee lagu keydiyo hormoonka koritaanka.
Sidee baan u bixin karaa?
- Waxaannu aqbalnaa bixinta lacagta caddaanka ah ee Bangkok ama Pattaya. Lacagta hormoonka koritaanka ee magaalooyinka kale ee Thailand ayaa aqbalaya xisaabta bangiga Thailand
Waa maxay tayada alaabooyinka aad?
- Waxaanu iibinaa oo kaliya magaca noocyada HGH dhab ah sida Genotropin, Ansomone iyo Jintropin kuwaas oo si rasmi ah u soo saaray iyo xaqiijiyay GMP.
Dhamaantoodna waa sheybaarka daroogada HGH, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu daweeyo carruurta yaryar ee GH, gubasho iyo cuduro kale.
Sidee baan u hubin karaa in tani aysan ahayn HGH been abuur ah?
- Sababta aan u iibineyno hoormoonka koritaanka ee soo saarayaasha kale waa khatarta ugu badan ee ka hortagga. Dukaankeenna ma ahan sanadka ugu horeeya ee hormoonnada asalka ah ee astaamaha caanka ah sida Belgian Genotropin , Shiineys Ansomone iyo Jintropin. Noocyo kale oo hormoon korriin 70% been abuur.
Ma heli karaa waraaqda hormoonka koritaanka hormoonka hudheelka, gurigeyga ama qoyskayga?
- Haa, kumbuyuutarku waa lacag la'aan laakiin waxaa laga helaa Bangkok iyo Pattaya. Magaalooyinka kale ee Thailand, gaarsiinta waxaa ku jira shixnado hawo oo ku jira weel caafimaad oo gaar ah oo bilaash ah.
Sidee u xireysaa oo u xafidaa amarkaaga?
- Hab kasta oo dhalmada, waxaannu siinaynaa hormoonka koritaanka ee weel caafimaad oo gaar ah kaas oo ah xaaladaha ugu keydsan.
Miyaad haysataa dukaanka farmashiyaha hormoonka koritaanka ama rugta caafimaadka ee Bangkok ama Thailand?
- Waxaanu nahay farmashiyaha internetka, oo leh sumcad wanaagsan iyo sannadihii 5 ee ganacsiga online ee Thailand
Sidee u iibin kartaa qiimahaas oo kale?
- Waxaan HGH si toos ah uga helnaa warshad. Waxay noo ogolaaneysaa inaan qiimaha hoos u dhigo. Sidoo kale, HGH waa takhasuskeena - waa nooca kaliya ee alaabooyinka aan iibino - sidaas awgeed waxaanu kuugu soo bandhigi karnaa qiimo ka fiican dukaamada steroid, oo iibiya HGH sidii lagu daray.
Tani maaha mid qaali ah HGH dhab ah ee badeecada Belgian ee Pfizer,
Sidoo kale waxaad maraakiib bilaash ah ku heli kartaa sanduuq qabow, aalkolo iyo cirbadeeyn buuxda
Haa dabcan, markaad sameysid amar, samee qoraal - waxaanu keennaa oo tusi sida loo isticmaalo
Waxaad geeyn kartaa Genotropin hudheelkeyga Bangkok oo ku tusaya sida loo isticmaalo qalinka?
Haa, hubi inaanu samayn karno gawaarida BKK